Weerarkii Masaajidka New Zealand: Tallaabo muhiim ah oo hirgashay - BBC News Somali
Weerarkii Masaajidka New Zealand: Tallaabo muhiim ah oo hirgashay
Image caption Shacabka oo hubkooda ku wareejinaya dowladda
Dadka reer New Zealand ayaa billaabay inay dowladda ku wareejiyaan hubka darandoorriga u dhaca, gaar ahaan qoryaha noocoodu yahay kii loo adeegsaday weerarkii lagu laayay muslimiinta ku jiray masaajidka Christchurch.
Tallaabadan ayaa qeyb ka ah go'aan ay dowladdu ku mamnuucday hubka ceynkaas ah, wixii ka dambeeyay weerarkaas oo bishii Maarso lagu dilay 51 ruux oo masaajid ku cibaadeysanayay.
Dowladda New Zealand ayaa wax ka baddashay sharciga hubka, si loo yareeyo falalka noocaas ah.
Toogashadii Christchurch: Erdogan oo soo bandhigay muuqaalladii weerarka
Howsha hub wareejinta ah oo billaabatay maanta oo Sabti ah ayaa noqoneysa tii ugu horreysay, waxaana la filayaa in ilaa 250 jeer hub uruurinta laga sameeyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee dalkaas.
Dowladda ayaa dib uga iibsaneysa dadka heysta hubkaasi, si ay magdhow u helaan.
In ka badan NZ$433,600, oo lacagta New Zealand ah, una dhiganta ku dhawaad $300,000 ayaa lagu kharash gareeyay magdhowga la siiyay 169 oo ilaa hadda hubkaas wareejisay, waxaana laga qaaday ilaa 224 qori oo ay horay u iibsadeen.
Image caption Hubka darandoorriga u dhaca
Hubkaas ayaa isla markii ay dowladdu gacanta ku dhigtayba la burburiyay.
"Boolisku waxay ogyihiin isbaddalka weyn ee ku yimid sharciga hubka ay shacabka isticmaalaan, waxaana maqleynaa jawaabo fiican oo kasoo yeeraya shacabka, iyagoo maantana billaabay howsha hub wareejinta ah", ayuu yidhi mid kamid ah taliyeyaasha booliska gobollada, oo lagu magacaabo Mike Johnson.
Sarkaalkan ayaa sheegay in dad ka badan 900 oo milkiileyaal hub ah ay iska diiwaan galiyeen gobolka Canterbury, si ay qoryahooda lacag ugu baddashaan.
Ra'iisul wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa ol'ole weyn u sameysay in la qaado tallaabada dalkaas looga cirib tirayo noocyada qorigii loo adeegsaday weerarkii masaajidka.
Image caption Ra'iisul wasaaraha New Zealand
Qaraarka wax looga baddalay sharciga hubka oo tirsigiisu yahay 119-1 ayaa la meel mariyay bishii Abriil, waxaana la mamnuucay qoryaha u dhow kuwa milatariga ay isticmaalaan ee u dhaca sida darandoorriga ah.
Mar ay khudbad qiiro leh ka jeedinaysay baarlamaanka bishii Abriil ayey Mrs Ardern tidhi: "ma qiyaasi karo caqabad laga cabssanayo oo ka xun midda hadda taagan".